Loko avo lenta toy izany, Toerana fandroana toy ny hip tokoa!
Home / Blog / Loko avo lenta toy izany, Toerana fandroana toy ny hip tokoa!
2021 / 03 / 29 FisokajianaBlog 2975 0
Ny famolavolana anatiny dia matetika tohanan'ny loko mba hampisy fihenjanana bebe kokoa, fa raha ny habaka amin'ny efitra fandroana dia tsy dia mpandala ny nentin-dra ny loko, na dia mahazatra aza ny fampiasana loko mainty sy fotsy, fa rehefa mandeha ny fotoana dia mamorona sary monoton. vokany, mahatonga azy io ho maloka.
Amin'ny maha efitrano fidiovana manokana azy, tokony hanana ny lokony manokana ve izy? Eny ny valiny. Ato amin'ity gazety ity, andao hiresaka momba an'io lohahevitra io.
Orange, solontenan'ny sekoly mamiratra amin'ny loko, dia manana ny toetrany malefaka malefaka. Na maizina na mazava, na mamirapiratra na maizina, ny tonony tsirairay dia samy manana ny toe-javatra malefaka tsy manam-paharoa, ahoana no tsy avela hamamoana ny olona.
Ny manga, milamina ary lalina, dia mety amin'ny famenoana ny habaka amin'ny ambaratonga lehibe; ny volomboasary dia mamiratra sy mazava, ary ny haingo kely dia afaka mamoaka rivo-piainana tsy mahazatra sy mavitrika; rehefa mihaona izy roa dia mamorona toerana mahafinaritra tsy misy fikasana.
Ao amin'ny fampiharana dia ampirisihina hisafidy fitambarana manga sy volomboasary matevina ambany, izay tsy dia mirehareha loatra fa tsy mamirapiratra loatra. Ny refin'ny fizarana, ny manga toy ny tonony lehibe, volomboasary toy ny lokony accent, ka mirindra sy mivoaka ny lalao mirindra kokoa.
Maitso ahitra + voasary haran-dranomasina
Ao amin'ny efitrano fandroana loko mainty sy fotsy, eo amina ahitra maitso + haran-dranomasina sakana loko geometrika ho an'ny famenoana loko, dia afaka mampamirapiratra sy malefaka ny fandroana. Ny hazavana sy ny loko malefaka mitambatra, ny fandikana ny farany toetra malefaka toetra.
Amin'ny maha-solontenan'ny fahitana tantaram-pitiavana, ny famenoana loko mavokely dia feno tsy ampoizina foana. Ny loko maivana sy maivana, samy kanto sy tantaram-pitiavana, miaraka amin'ny tsy fananan-tsiny toy ny zazavavy, dia safidio ho loko lehibe amin'ny toerana fidiovana, izy no hendry.
Pink + fotsy
Feon-tsakafo mafana mavokely + fotsy mamorona ny efitrano fandroana, malefaka ny tonony ankapobeny, feno rivotra iainana sy maha-hafanana ny tovovavy. Kambana mavomavo mamirapiratra kely misy rindrina fotsy madio ho toy ny tetezamita, loko milamina toy izany miaraka amina toe-tsaina milamina, manome ny herin'ny hafanana ny olona.
Mavokely miboridana + maitso mainty
Ny fifandonana loko mavokely miboridana + maitso mainty dia apetraka amin'ny tahan'ny telo ka hatramin'ny roa, mitondra rivo-piainana mahafinaritra. Ny roa ampahatelon'ny fotony maitso maizina, manampy ampahatelon'ny fangaro mavokely miboridana, ny fifanoherana loko mahery dia miteraka fihenjanana ara-pahitana tena tsara, mahatonga ny toerana fandroana manontolo ho tena kanto.
Pink + mainty
Black sy mavokely amin'izy samy izy, na dia tsy madio sy mamiratra toy ny lafiny fotsy aza, fa ny fiteny miloko manokana. Ny loko roa dia mifamatotra amin'ny fitaovana samihafa ambonin'ny tile, mifangaro ao ambanin'ny firindrana tsy ampoizina. Efitra mavokely, kely noho ny marefo tany am-boalohany, onjam-pifehezana mazava kokoa sy kanto kokoa, izay misy ny fifandonana mainty hamokarana ny lokon'ny loko.
Pink + volondavenona
Ity dia loko mitambatra mahazatra, zokiolona, ​​kanto, tantaram-pitiavana, izay ny hatsarana hita maso asehon'izy ireo. Na samy voaravaka amin'ny iray izy ireo, na mitovy, dia manana loko marevaka izy ireo izay tsy tokony hatao ambanin-javatra.
Drafitra loko maitso
Green, ny loko tena ilaina indrindra amin'ny paleta, na ny fampiasana faritra midadasika na ny haingo eo an-toerana, amin'ny alàlan'ny hatsaran-tarehin'izy ireo manokana mba hamoahana ny fijerin'ny tena manokana, avelao ny olona ho tia amin'ny fahitana voalohany.
Green + loko hazo
Ny loko maitso dia ampiasaina ho tononkira lehibe hanaparitahana ny habaka manontolo, hamoahana ny atmosfera voajanahary, ary ny lalotra miloko hazo dia ampiasaina hanamafisana ny tsiro ankapobeny. Ny fampisehoana loko voajanahary sy voajanahary toy izany dia manome ny habaka manontolo hatsaran-tarehy voajanahary tsy hay tononina.
Ny fihaonana amin'ny maintso sy fotsy dia misy fientanam-po mahafinaritra izay toa manaitra ny toe-tsaina madio ao am-po. Ny lalao misy eo amin'ny roa tonta, tsy miraharaha ny ampahany, na ny firavaka, na roa sy sasany sy sasany, dia miaraka amin'ny fanehoana halemem-panahy, famelombelona sy mahafinaritra.
Maitso + Mainty
Amin'ity habaka maitso lehibe ity, ny mainty dia lasa loko accent misy eo aminy. Low-key sy introverted nefa tsy very poise, ny firafitry ny prelude mirindra, ka ny habakabaka iray manontolo dia feno fahatsapana ambaratonga ambony.
Ny loko mena mafana, matetika kokoa noho ny tsy, dia miseho ho loko accent, fa tsy midika izany fa tsy afaka ny ho lasa loko lehibe. Na inona na inona ny tahan'ny, dia mbola manana fomba fijery mahavariana ihany.
Mena + volondavenona
Ny mena biriky mavesatra dia tsy mitovy amin'ny loko mainty hafa, feo mafana tsy miandany izay afaka manome fotoana feno ny habaka manontolo, miaraka amina volondavenona ambony lalina ihany, mamorona fahatsaram-panahy lalina sy mahafinaritra.
Mena + fotsy
Anisan'ireo mena mibodo faritra lehibe, miampy fotsy, manasongadina fahatsarana hatsarana marefo sy kanto. Avy amin'ny tetezamita mena sy fotsy, dia avy amin'ny hatsaran-tarehin'ny gradient iray.
Aorian'ny famakiana ireo loko miloko ireo, hita ve fa ny toerana fidiovana tany am-boalohany dia mety ho "maro loko" ihany koa? Raha ny marina, raha ampitahaina amin'ny monotony volondavenona mainty sy fotsy, ny fampiasana loko maro be ho an'ny efitrano fandroana dia miorina amin'ny fahatsapana fahitana mahafinaritra. Mendrika fa tsy hahavery ny zokiny, ka faly ny olona.
Previous :: 2021 Lokon'ny fandroana miaraka amin'ny, manaova veloma ny estetika "eto an-tany", avelao "handoko" ny tranonao! Next: Ity ny efitrano fandroana, ny iray ao an-tranonao dia trano fidiovana fotsiny - fironana vaovao amin'ny famolavolana trano fidiovana amin'ny 2021